kulan laggu soo dhaweynaayo xafiiska cusub ee UNSOM Soomaaliya oo Garowe ka dhacay – Radio Daljir
Juunyo 3, 2013 6:40 b 0
Garowe,03 June 2013 Mas?uuliyiin katirsan dowladda Puntland iyo wakiilada qaramada midoobay ayaa? maanta qabtay kulan lagu sagootinayay xafiiskii hore ee qaramada midoobay arimaha Soomaaliya ee UNPOS oo wakhtigiisu ladhamaaday xilligii kmg ee? dowladdii hore ?Soomaaliya.
Waxaa kale oo kulankaan lagusoo dhaweynayay u qeybsanaha ?cusub xafiiska? qaramada midoobay arimaha Soomaaliya ?Niclos Key? oo maanta si rasmiya xilkii ugala wareegay Augstin philip Mahiga oo muddo badan xilkaas haayay.
Kulankaas waxaa Puntland uga qeyb galay wasiiro uu kamid ahaa wasiirka waxbarashada Puntland C/Faarax Siciid Juxa iyo mas?uuliyiin kale. Waxaana xaga qaramada midoobay uga qeyb galay wakiilo .
Waxaa kulanka laga aqriyay warbixin ku aadan xilliga qaramada midooobay soo magacowday xafiiskaan cusub ee United Nations Assistance Mission in Somalia ee UNSOM wakiilka cusubna looga dhigay? Niclos Key.
Waxaana lagu akhriyey warbixinta in xafiiskaan cusub uu ka shaqeyndoono, sidii taageero loogu raadin lahaa dib u hishiisiinta Soomaalida . Gacan laga gaysto fududaynta lagu taageerayo dowladda rasmiga ah ee haatan ka jirta Soomaaliya, ?howlaha siyaasadeed ee ugu muhiimsan dastuurka sida dajinta nidaamka federalka , Hanaanka dib u eegista dastuurka iyo aftida dastuurka? ee xiga iyo diyaarinta doorashooyinka 2016 da.
UNSOM ayaa ka sokow Muqdisho xafiisyo ku lahaan doona Garowe iyo Hargeysa ,waxana si rasmi shaqadii ula wareegay maanta Nocals Kay.
Sido kale waxaa soo dhaweeyey xafiiskaan cusub ee Qaramadda Middoobey dhamaan masuuliyiinta kala duwan ee Dowladda Soomaaliya, waxaana meesha ka baxaya xafiiskii UNPOS.